Wariye Buur-gaabo oo Xabsiga la Dhigay – Rasaasa News
Wariye Buur-gaabo oo Xabsiga la Dhigay
Jijig, June 13, 2014 – Wariye Ismaaciil Ibraahim “Buurgabo” oo ka mid ahaa hawlwadeenada ESTV ugu mihiimsan, ahaana wariyaha gaarka ah xarunta madaxtooyada Ismaamulka Somalida Atobiya, ayaa xabsiga la dhigay.
Wariye Buur-gaabo oo ka mid ahaan jiray wariyeyaasha sida foosha xun uga faalooda dhaqdhaqaaqa gobonimodoonka ONLF, ayaa xadhigiisa lagu sheegay in uu la xidhiidho dacwad ah in uu yahay UBO [xidhiidh la lahaa ururka ONLF]. Ismaaciil Ibraahim “Buur-gaabo” waxaa uu ka mid ahaan jiray xili taageerayaasha ururka ONLF, ee magaalada Gaalkacyo, ka hor inta uusan ku soo laaban degaanka, halkaas oo lagu siiyey tababar wariyenimo.
Wariye Ismaaciil Ibraahim “Buur-gaabo” ayey Boolisku xidheen, ka dib kolkii uu dacwad UBO-nimo ah ku oogay nin ay gabadh isku qabsadeen. Wariye Buur-gaabo ayaa maalmo, ka dib kolkii ay Boolisku siidaayeen, sida la sheegay Toori ku dhuftay ninkii dacweeyey ee ay gabadh isku haysteen.
Wariye Buur-gaabo, ayaa mar labaad lagu celiyey xabsigii uu maalmo ka hor ka soo baxay.
Ninka Toorida uu ku dhuftay oo aanaan wali magciisa helin, ayaa la sheegay in uu dhaawac xun yahay, yaalana Isbitaalka Kaaraamardha.
Erayga UBO, ee lagu dacweeyey Ismaaciil Ibraahim “Buur-gaabo” ayaa magaalada Jijiga loogu yeedha qabiilka Ogadeenka, iyada oo loola jeedo waxay ka tirsan yihiin ururka ONLF.
Eraygan oo degaanka looga yaqaan dambiile, ayaa si gaar ah loogu beegsadaa dad gaar ah, waxaana dacwada eraygan xabsi ugu jira tobanaan kun oo ruux. Waa eray dambi oo loo adeegsado ruuxa la doonayo in la xidho ama la xumeeyo.
Madaxwaynaha degaanka oo erygan UBO aad u isticmaala, kana dhigay eray dambiile, ayaa isaga laftigiisa hada lagu xantaa in uu yahay UBO, waana erayga uu u dhiman doono aakhiritaanka sida Wariye Ismaaciil Ibraahim “Buur-gaaboi”.
Maamulka Somaliland oo Diray Ciidan iyo Saanad